Waxaanu Luminay Fursadahaygii, Waananu Sii Ogeyn In Sidani Dhacayso – James Milner Oo Ka Hadlay Guul-darradii Kasoo Gaadhay Red Star Belgrade – Cadalool.com
Waxaanu Luminay Fursadahaygii, Waananu Sii Ogeyn In Sidani Dhacayso – James Milner Oo Ka Hadlay Guul-darradii Kasoo Gaadhay Red Star Belgrade
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul-darro xanuun badan ka dhaxashay ciyaar aad ugu dhib badnayd oo ay marti ugu noqotay naadiga reer Serbie ee Red Star Belgrade, taas oo loogu awood sheegtay 2-0.
Liverpool ayaa intii ay ciyaartu socotay aan soo bandhigin ciyaartii lagu yaqaanay, dardartii iyo orodkii ay kooxaha ku dawakhin jirtay, balse waxay ahayd naadi liita oo kubaddu ka lumayso marka ay ku dhowaadaan goolka kooxda kasoo horjeedda ee Red Star.
Labada goolba waxa Liverpool ka dhaliyey muddo lix daqiiqadood gudahood ah weeraryahanka Milan Pavkov qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana ay taasi ka lumisay Reds fursad ay hoggaanka GROUP-ka dhimashada ee C kusii xejisan lahayd, isla markaana ka sarrayn lahayd Napoli iyo PSG.
Labada ciyaarood ee uga hadhay group-ka, waxay Liverpool la ciyaari doontaa Napoli iyo PSG, waxaanay u baahan tahay ugu yaraan inay hal kulan badiso, si ay u yeelato rajo ay ku tegi karto wareegga 16-ka.
Markii ay ciyaartaasi dhamaatay, waxa warbaahinta la hadlay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Liverpool ee James Milner, waxaanu ku adkaystay in naadigiisu helay fursadihii ay u baahnaayeen si ay ciyaarta ugu guuleystaan, hase yeeshee ay dhamaantood iska khasaariyeen, waxaanu dul istaagay farqiga u dhexeeya kooxdooda xili ciyaareedkan iyo sannadkii hore oo ay finalka tageen.
“Ma garanayo tirada fursadaha aanu samaynay, laakiin waxay ahaayeen kuwo wanaagsan oo aanu ka faa’iidaysan weynay.” Sidaas ayuu yidhi James Milner oo dhamaadkii ciyaarta u warramay telefishanka BT Sport.
“Marka aad ka faa’iidaysan weydo fursaha aad abuurtay, sidan oo kale ayaa kugu dhacaysa. Xili ciyaareedkii hore se waxaanu dhalinay goolal badan sababtuna waa inaanu ka faa’iidaysanay fursadihii aanu helnay. Haddii aanu fursadahaas caawa qaadan lahayn, ciyaartu way ka duwanaan lahayd sidan.” Ayuu ku daray.
Milner waxa uu qiray in qaybtii hore aanay kooxdiisu si fiican u bilaabin, balse ay isbeddel fiican sameeyeen qaybtii labaad, dhibaatada heshay se tahay in aanay ka faa’iidaysanin fursadaha.
Dhinaca kale, James Milner waxa uu xusay inay sii ogaayeen in jewiga garoonku adkaanayo oo ay iman doonaan taageereyaal badan oo naqaska ku dhejin doona, waxaase uu tilmaamay in sidan oo kale ku dhacday Napoli oo barbarro la gashay Red Star Belgrade.